पाँचथरमा ठूलो बस दुर्घटना, अहिलेसम्म ४ जनाकाे ज्यान गयो! – PathivaraOnline
Home > समाचार > पाँचथरमा ठूलो बस दुर्घटना, अहिलेसम्म ४ जनाकाे ज्यान गयो!
काठमाडौ । पाँचथरमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुगेको छ । पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ शिवादोभानबाट झापाका लागि छुटेको बस दुर्घटनामा परेको हो ।
फिदिम–४ स्थित मध्य पहाडी लोकमार्गको सगरखण्डेमा सोमबार बिहान ११ बजे भएको उक्त दुर्घटनामा अहिलेसम्म चार जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका सूचना अधिकारी डम्बर विश्वकर्माले बताए । को १ ख ३८६५ नम्बरको बस फिदिम नगरपालिका–४ शान्तिपुरमा सडकबाट झरेर दुर्घटनामा परेको हो ।
मृत्यु हुनेमध्ये ३ जनाको सनाखत भएको छ । ज्यान गुमाउनेमा प्रमिला देवान, निश्चल देवान, प्रज्जवल मगर रहेका छन् । मृतक एक जनाको नाम खुल्न बाँकि रहेको छ । विश्वकर्माका अनुसार दुर्घटनामा अरू लगभग ६० जना घाइते बनेका छन् । गम्भिर घाईतेहरूलाई सुबिधा सम्पन्न अस्पताल लैजानको विराटनगरबाट हेलिकप्टर आउदै गरेको बताईएको छ । केहि घाईतेहरूको पाँचथर अस्पताल,पाथिभरा अस्पताल र सर्मपित अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ ।